UKUTOLIKWA KWAMAKHADI NGOKWENDAWO OBEKELELE kuyo
Kwinqaku lanamhlanje siza kufumanisa ukutolika ukuba i amakhadi e-tarot ngokwendawo yakho, fumanisa yonke into ekusele yona, ungaphoswa.
1 Ukutolikwa kwamakhadi e-tarot
2 Eminye imizekelo yeembaleki
2.1 Ileta yeNqaba
2.4 Umzekelo wokugqibela
Ukutolikwa kwamakhadi e-tarot
Ngelixa sifunda amakhadi, indibaniselwano engapheliyo yamakhadi e-tarot anokuvela, anokuba ngasekunene okanye ajikwe kwaye anokuvela ngolandelelwano oluthile, ukufunda ukuqonda ukutolikwa kwabo banokuba nako ngamanye amaxesha kunokuba nzima, kufuneka sifunde kwaye sazi ikhadi ngalinye.
Kungenxa yoko le nto siza kukuphatha ngeli nqaku ukukunika intshayelelo malunga nokutolika okunokwenzeka, kuxhomekeke kumakhadi aphuma ekusasazeni. Ngaphambi kokukunika eminye imizekelo, khumbula ukuba le ndlela yokuziqhelanisa nayo iyinto esisiseko, ngaphandle kwamava kunye noxinzelelo.
Inqaku elibalulekileyo ekufuneka liqondwe kukuba sinokwazi intsingiselo yeleta ngokukodwa, kodwa ukuba iphuma kunye nabanye, olo toliko lungatshintsha kunye nezo ngongoma kufuneka zithathelwe ingqalelo.
Ukuba ufuna ukuqala kweli hlabathi, sicebisa ukuba ufunde, uqhubeke nokufunda malunga nesihloko kwaye uqalise ukuziqhelanisa kunye nabahlobo kunye nosapho kwaye ngale ndlela uya kuba nakho ukwenza ukuba i-intuition kunye nobukrelekrele bakho kuloo ndawo.
Eminye imizekelo yeembaleki
Makhe sibone apha ngezantsi eminye imizekelo yeembaleki, ezinokukunceda uqonde ngokucacileyo ukuba ungaqala njani ukwenza ukutolika okufanelekileyo:
Okokuqala, sinayo ileta evela inqabaSiyazi ukuba le leta inentsingiselo engathandekiyo, kodwa isenokuba nayo eyakhayo ukuba ihamba kunye nezinye iileta.
Sibuza lo mbuzo ulandelayo: Yintoni endigcinele yona kubudlelwane bam njengesibini? Oku kubaluleke kakhulu, akufuneki ulibale indlela owawubhale ngayo umbuzo kuba oku kubalulekile kutoliko olulandelayo.
Emva koku ziyaphuma iileta Inyanga, INqaba kunye La Muerte, ukutolikwa ngokuchanekileyo kwesi sandla, ingaba ubudlelwane bakho bugcwele ukugxekwa okanye ezinye izinto eziphazamisayo, eziguqula ukuvumelana kunye nolonwabo olwaluhlala kulo, kwaye lunokulutshabalalisa ngokupheleleyo.
Kwelinye icala, ukuba enye indibaniselwano yaphuma efana: Inqaba, umthandi kunye ilanga, ukutolikwa kuya kuba kukuba bafikelela kwinqanaba apho bafuna ukuya kwelinye inqanaba njengesibini, umtshato unokuba sekufuphi ngekona, bakwizinga labo lobudlelwane.
Ngenxa yesimbo seleta, singacinga ukuba imele ukufa ngokuthe ngqo, kodwa, nangona kukho amaxesha apho intsingiselo yayo, kwezinye ezininzi inokubonisa ukuba utshintsho olukhulu luza kubomi bakho, inguqu yobuqu kunye nokusingqongileyo, oko kuya kuxhomekeka Njengakumzekelo wangaphambili wamaqabane akhe. Makhe sijonge eminye imizekelo.
Sibuza lo mbuzo ulandelayo: Liya kuba yintoni ikamva lam kwiiprojekthi zam?
Emva koko unobumba Ukufa, iLanga kunye ImotoOku kuthetha ukuba kuyakubakho utshintsho oluqinisekileyo, kule projekthi uthe wayimisa ngaphandle kokuqhubeka okanye emsebenzini wakho, iingcango ezintsha zivulekile, kodwa kuya kufuneka uphumelele ukuze uqale ukuhamba.
Ukuba endaweni yoku iileta zoKufa kunye nabathandi ziyaphuma, kunokutolikwa ukuba izithintelo ezithile okanye ubunzima bezoqoqosho buza kuvela kwaye kungenxa yokuba ungakhange uthathe izigqibo ngokuqina ngokwaneleyo ukuziphumeza.
Qhubeka ufunda malunga, Intsingiselo yamakhadi e-tarot kwaye ungene kweli hlabathi limangalisayo, ngenisa ikhonkco langaphambili.
Ikhadi elineentsingiselo ezibanzi ezilungileyo, ezimele iziqalo ezintsha, uguquko, inguquko, uhlaziyo, utshintsho olukhulu ebomini. Makhe sihlalutye ezinye zokudityaniswa kwazo:
Sibuza lo mbuzo ulandelayo: Iyintoni ikamva lam emsebenzini wam?
Ukuba ukudityaniswa kwekhadi kuza: Ityala, El Enamorado y La Luna, isenokungabi nencazelo eyakhayo njengoko ikhadi lesigwebo linayo ngokubanzi, ibonisa ukuba nangona ufuna ukutshintsha umsebenzi, ayiloxesha lokwenza utshintsho kubomi bakho, umsebenzi omtsha awubonakali ikamva lakho.
Kwelinye icala, ukuba indibaniselwano ye: El Juicio, El Enamorado y La Torre iyaphuma, inokubonisa ukuba nokuba utshintsho lukhona, aluyi kuba lulutho kwezoqoqosho, abayi kukhuthazwa ukuba bathathe inyathelo, kuba oko likunikayo umsebenzi wakho wangoku ungcono kakhulu.
Kwiiseshoni ezininzi zokufunda iileta, enye yezona mibuzo ziphindaphindayo kukucela ukubonisana malunga nokuqala kweshishini elitsha okanye iprojekthi, ngokusekwe kulo mbuzo siza kukubonisa ngokudibanisa iileta ezimbini ezinokutolikwa ngokwahlukileyo.
Kwindawo yokuqala, ukuba bayaphuma: El Colgado, Umlingo kunye no-El Carro, ezi zinto zibonisa izinto ezintle nezintle ngokubhekisele kule projekthi, unazo zonke izinto eziyimfuneko ezandleni zakho ukuze loo projekthi okanye ishishini lenziwe lisebenze, kwaye liqale ukuvelisa iziqhamo obuzilindile kangangeminyaka emininzi. Impumelelo isezandleni zakho.
Kwelinye icala, ukuba bayaphuma I-La Estrella, Ingcuka kunye neLa Torre: Oku akuzisi zindaba zimnandi, nangona ukholwe ixesha elide ukuba umbono wakho ulunge kakhulu kwaye uyakuvelisa ingeniso enkulu yezoqoqosho, eli ayiloxesha elifanelekileyo lokuqalisa, uninzi lwezithintelo lubonwa ngakuwe olungazuku vumela ukuqala ngempumelelo kwaye uqhubeke.
Konke oku kusibonisa ukuba ngonobumba omnye asinakho ukwenza utoliko oluchanekileyo kumntu ocela ulwazi, isindululo kukuba ukuba ngoonobumba abathathu akonelanga ukwenza ukutolika okuhle, kuyavunyelwa ukuba kuthathwe owesine kwaye Ngale ndlela unokufumana umbono ongcono wentsingiselo yamakhadi angaphambili.
Ungalibali ukuqhubeka nokufunda kunye nokufunda ukuze ufumane ukutolikwa ngokuchanekileyo kwaye ngaloo ndlela ungaqala ukwazi ukuba ikamva likuphathele ntoni na. Ukuba lonke olu lwazi alucacanga ngokwaneleyo, sikushiya ividiyo engezantsi esinethemba lokuba uyonwabele